မောငျ(စှယျစုံကမျြး): ကွန်ပြူတာ Notepad မှ မြန်မာစာ သိမ်းချင်တဲ့ သူတွေအတွက် မြန်မာစာပေါ်အောင် ဒီနည်းလေး ကို ကြည့်လိုက်ပါ
ကွန်ပြူတာ Notepad မှ မြန်မာစာ သိမ်းချင်တဲ့ သူတွေအတွက် မြန်မာစာပေါ်အောင် ဒီနည်းလေး ကို ကြည့်လိုက်ပါ
ကျနော်တို့ ကွန်ပြူတာသုံးတဲ့ သူတိုင်း ဟာ Website တွေထဲက စာတွေ, ကဗျာ တွေ ပြီးတော့ လင့်တွေကို Notepad ထဲမှာ သိမ်းကြပါတယ်။ အခု မြန်မာစာကို Notepad ထဲမှာ သိမ်းရန် Save ပြီးတိုင်း ပုံကလို ???? ပဲ ပေါ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဖြေရှင်းနည်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ လူဟောင်းတွေကတော့ လူတိုင်း နည်းပါး ဒါကို နားလည်ကြပါတယ်။
အခုမှ စသုံးတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီနည်းလေးရေးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ မေးလာကြတာလည်း များလာလို့ အလွယ် ကြည့်နိုင်အောင် ဒီနည်းလေးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကွန်ပြူတာ သုံးသူတိုင်း လူတိုင်း ဖြစ်မနေ Notepad ကို အသုံးပြုရတာပါ။ အောက်မှာ ပုံနှင့်တကွ သေချာလေး ပြထားပေးပါတယ်။ အားလုံး နားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး မိမိကွန်ပြူတာရဲ့ Dasktop နေရာလွတ်တခုခုကို Right Click ထောက်လိုက်ပြီး အောက်ကပုံကို ကြည့်လိုက်ပါ။
New ကိုကလစ်ပြီး Text Documant ကို ကလစ်လိုက်ရင် Dasktop မှာ Text ဖိုင်တခု ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဖိုင်ကို ဖွင့်ပြီး မြန်မာစာရေးရင် အောက်က ပုံလို အတုံးတွေသာ မြင်ရပါမယ်။
မြန်မာစာ မြင်ရဖို့က အောက်ကပုံကိုပြည့်လိုက်ပြီး ဆက်လုပ်လိုက်ပါ။ Format ကိုကလစ်ပြီး Font ကိုကလစ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် အောက်ကပုံလို ဘောက်တခုကျလာပါမယ်။ အဲအခါဆိုရင် Zawgyi-One ကိုပြောင်းပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ မြန်မာလိုမြင်ရပါပြီ။ Save ဖို့က အောက်ကပုံကို ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။ အရင်ဆုံး File ကို နှိပ်ပြီး Save As ကို ကလစ်လိုက်ပါ။
Save As ကို ကလစ်ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံလို ဘောက်တခုကျလာပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ Encoding နေရာမှာ ANSI နဲ့ ပြနေပါတယ်။ အဲတာကို ဒီအတိုင်း Save လိုက်ရင်တော့ ???????? ပုံတွေပဲ ပေါ်ပါမယ်။ အောက်မှာ မြားပြထားသလို Unicode ပြောင်းပြီးမှ Save ပါ။
ပြီးရင် Do You Want To Replay It ဆိုတဲ့ စာတန်းနဲ့ ဘောက်တခုကျလာရင် Yes သာပေးလိုက်ပါ။ ဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ အားလုံး အဆင်ပြေပါပြီ။
ဒီလောက်ဆိုရင် မေးထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ဆရာ မသိတာတွေ သိခဲ့ရတယ် မလုပ်တတ်တာတွေ သင်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပါ
adobe photoshort ကိုမြန်မာစာ မ၇လို့ ကူညီပါနော်.....